Ugxeka ukubulawa kobesolwa ngokuthakatha | IOL Isolezwe
Ugxeka ukubulawa kobesolwa ngokuthakatha
Isolezwe / 20 June 2012, 11:08am /
UNGQONGQOSHE wezokuThuthukiswa komphakathi uNksz Weziwe Thusi ethula inkulumo emphakathini waseZingolweni ngokuziphatha kwentsha
UNGQONGQOSHE woMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Weziwe Thusi (osesithombeni) usegxeke isigameko sokushiswa kukagogo waseThobothini eNgwavuma nabazukulu bakhe ngempelasonto.
UNkk Thokozile Tembe (72), nabazukulu bakhe uSlindile Mnguni (11) noSphesihle Nyawo (3) kuthiwa bashe basala bewumlotha endlini abebelele kuyo.
Indodakazi kaNkk Tembe, uNksz Fikile Mnguni itshele Isolezwe emuva kwalesi sigameko ukuthi unina ubengumuntu othanda amakhambi esintu kanti kukhona abese bemsola ngokuthi uyathakatha endaweni.
Uthe akekho oseke weza kubo noma waya enduneni yendawo eyokhuluma lolu daba kodwa bekuyinto ebikhulunywa endaweni yikho besola ukuthi unina ushiswe ngabantu.
UNgqongqoshe uThusi uthe kuyishwa ukuthi abantu basaqhubeka nokulahlekelwa yizimpilo zabo ngalolu hlobo.
“Ukubulawa ngesihluku kwabantu abadala nezingane akunasidingo. Uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuqwashisa abantu ngokuhlukunyezwa kwabantu abadala kodwa kuyacaca ukuthi kumele zizame kakhulu kunakuqala ngoba kubukeka sengathi abantu abezwa umyalezo esisuke siwudlulisa,” kusho uNkk Thusi.
Uthe unxusa amalungu omphakathi ukuthi afunde ngezinye izimo ezihlasela abantu abadala uma sebekhulile ezenza ukuthi benze izinto ezingajwayelekile ezibenza basale bedidekile bengazazi ukuthi bakuphi.
“Emasontweni amabili edlule kwatholakala owesifazane osekhulile ezihambela nje edolobheni eMgungundlovu walethwa ehhovisi lami. Kwathi uma kuseshwa kwatholakala ukuthi ubeze edolobheni nendodana yakhe, badukelana, wayengazazi ukuthi ukuphi. Lokhu ngabe kuchaza ukuthi wayesethakatha? Kumele silwe nalolu hlobo lokuhlukumeza,” kuchaza uNkk Thusi.
Amaphoyisa aphenya icala lokubulala nelokuthungela ngomlilo.